ကြက်သားအိမ် စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများအတွက် တရုတ်ကြမ်းပြင် နို့တိုက်စနစ် မိုင်းတုံ
● ပြင်ပဟင်းခတ်ဗန်း၏ ပစ္စည်းထုထည်ကို ချိန်ညှိခြင်းအား ဂီယာ ၅ ချက်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားပြီး ကျန်ဗန်းများမှာ ဂီယာ ၁၀ ခု၊
● ပစ္စည်းတံခါးခလုတ်သည် ပစ္စည်းဗန်းကိုပိတ်သည်အထိ အထွက်အသံအတိုးအကျယ်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
● စွန့်ထုတ်သည့်ပမာဏကို ချိန်ညှိရန် အဆင်ပြေ၊ မြန်ဆန်ပြီး တိကျသောနည်းလမ်း၊
● ပန်းကန်ပြား၏အောက်ခြေကို ဖယ်ရှားပြီး ကြက်များအတွက် အစာစားရန် ပန်းကန်ပြားအဖြစ် အသုံးပြုရန် မြေကြီးပေါ်တွင် ထားရှိနိုင်ပါသည်။
● v ပုံသဏ္ဍာန် ကော်ပြန့်ပြားအောက်ခြေသည် ပန်းကန်အောက်ခြေတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ပစ္စည်းပမာဏကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကြက်များသည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စားသုံးနိုင်ကာ ဒယ်အိုးထဲတွင် အချိန်အကြာကြီး လဲလျောင်းနေသော ကြက်များကို အစာစားရန် သို့မဟုတ် အနားယူခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။
● ဖိတ်စင်သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အညစ်အကြေးများကို ရှောင်ရှားရန် ပန်းကန်ပြား၏ အစွန်းကို ဒယ်အိုး၏ အလယ်ဗဟိုသို့ ရွှေ့ထားသည်။
● အသားစားသီးနှံများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ဘေးကင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာ စားသုံးနိုင်ရန် အတွင်းပိုင်းရှိ အပြင်ဘက်အစွန်းကို ချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။
● ပစ္စည်းပိုက်ပေါ်ရှိ ပစ္စည်းဝေ့၏ တပ်ဆင်နည်းကို ပုံသေအမျိုးအစားနှင့် လွှဲအမျိုးအစား နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။
မြေတွင် အသားစားကြက်မွေးမြူခြင်းသည် သမားရိုးကျ မွေးမြူသည့်မုဒ်ဖြစ်သည်။
* 15 နှစ်မှ 20 နှစ်အထိဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုသေချာစေရန်ပူပြင်းသော dip galvanization နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ။
* အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်း၊ သောက်သုံးခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် စွမ်းအင်ကို သက်သာစေပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။
2019 Prefab Industrial Large Light Steel Structure Design ကြက်သားကြက်ခြံ Houseare သည် အသားစားသူများ၊ အလွှာများ၊ ဘဲများ၊ ငန်းများစသည်တို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြပြီး Main အလိုအလျောက်ကြက်သား feedersystemis တွင် ပစ္စည်းပို့ဆောင်သည့်ပိုက်၊ silo၊ auger၊ drive motor နှင့် material level အပါအဝင် အလိုအလျောက် feeder system အစုံအလင် sensor.Main Feed line သည် feeding pan system အတွင်းရှိ silo မှ hopper သို့ feed ကိုပို့ဆောင်ရန် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။ main feed line ၏အဆုံးတွင် onefeed sensor ပါရှိပြီး drive motor သည် အလိုအလျောက် feeding ကို အဖွင့်အပိတ် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် စတီးဘောင်ကြက်ခြံအိမ်ကိုလည်း ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ကြိုဆိုပါတယ်။
1. မျိုးပွားမှုပမာဏအရ အိမ်၏အရှည်ကို တွက်ချက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ကြက် ၁၅,၀၀၀ မွေးမြူပါက၊ အစာကျွေးသည့်လိုင်းအများအပြား၏ အကျယ်/၁၅,၀၀၀/၁၅ (ကြက်တစ်ခုစီ၏ ဘူတာအချိုးအစား) ကို အသုံးပြုပါ။
2. အကျယ်သည် ပစ္စည်းမျဉ်းတစ်ခုစီ၏ လေးမီတာအကွာ၊ ထို့ကြောင့် အကျယ်မှာ 4၊ 8၊ 12၊ 16၊ 20 ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ပန်းကန်ပြားလေးခုမှ တစ်ခုစီသည် ၃ မီတာ အကွာတွင် မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုစီရှိသည်။
အိမ်၏စတုရန်းပုံတွင် လောင်စာဆီအင်ဂျင် အရေအတွက်ကို ၃၀၀ ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။
1. ပစ္စည်းပြွန်နှင့် hopper နှစ်ခုစလုံးသည် 275g hot-dip galvanized ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း 12 နှစ်ထက်မက၊
2. မော်တာသည် ထိုင်ဝမ်မှ တင်သွင်းသော TAIWXIN ဖြစ်သည်။
3. ပစ္စည်းအဆင့်အာရုံခံကိရိယာ၊ ပစ္စည်းလိုင်းတစ်ခုစီ၏နောက်ဆုံးဗန်းတွင် ပစ္စည်းအဆင့်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုရှိသည်။ နောက်ဆုံးဗန်းပြည့်သောအခါ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ၎င်းအား အလိုအလျောက် ပို့ဆောင်ခြင်းကို ရပ်သွားစေသည်။
4. Screw auger - တောင်အာဖရိကမှ တင်သွင်းသော၊ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် အကွာအဝေး၊ တာရှည်ခံနိုင်မှုရှိပြီး ပစ္စည်းတိုင်းတွင် ပိုက်များရှိသည်။
ရေပိုက်ပေါ်တွင် ချိန်ခွင်လျှာပိုက်တစ်ခု ရှိပြီး လက်ကျန်ပိုက်ကို PVC ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားကာ လူနေနေရာ ဆန့်ကျင်ဘက်မျဉ်း ရှိပါသည်။ ကြက်များ ထိပ်ပေါ်မတက်အောင် တားဆီးပါ။
၃ မီတာ အရှည်ရှိ ရေလိုင်းတစ်ခုစီတွင် သောက်သုံးရေကန် လေးခုရှိသည်။
ယခင်- Intelligent Breeding Ventilation Fan
နောက်တစ်ခု: Hot Galvanized Wire Mesh H-Type Layer Cage